Factory famolavolana Cryolipolysis - Mpanamboatra famenon-tsakafo Cryolipolysis China
Masinina mampihena ny vatana - Cryolipolysis, Coolsculpting
ny milina mampihena vatana tsara indrindra dia ny Cryolipolysis Slimming Machine (mitovy amin'ny milina coolsculpting). Masinina cryolipolysis: fomba vaovao tsy manafika mba hampihenana moramora sy am-pahombiazana ny tavy any amin'ireo faritra kendrena amin'ny vatana ka miteraka fihenan'ny tavy hita maso efa mandroso sy hita maso.
Satria ny triglyceride amin'ny tavy dia hivadika ho maripana indrindra amin'ny maripana ambany indrindra, dia mampiasa teknolojia fanamafisana izy mba hikendrena tsara ny tavy matavy ary hanafoana ireo sela matavy amin'ny alalàn'ny dingana miandalana izay tsy manimba ny sela manodidina, mampihena ny tavy tsy ilaina, ny fifampikasohana amin'ny atiny mifehy ny mari-pana amin'ny hoditra ary miaro ny firafitry ny dermal tsara, mahatsapa ny fiovan'ny vatana haingana sy mihenjana ny hoditra!
Cryolipolysis mampihena sy milina mamorona vatana sano laser
Manangana fomba fitsaboana tsy manafika ary mampita tsara ny "anjara asa mangatsiaka" amin'ny toerana fanangonana tavy hanala ny sela matavy tsy azo ihodivirana. Raha ny fikarohana nataon'ny hopitaly Massachusetts Boston General sy ny manam-pahaizana momba ny dermatolojika Harvard Medical School any Amerika, dia mora kokoa ny tratran'ny sela mangatsiaka raha oharina amin'ny sela mivaingana. Ny sela matavy dia hampiorina sy hiova amin'ny 4 ℃. Saingy ny sela hafa akaiky dia ho faty amin'ny 0 ℃. Noho izany dia afaka manala soa aman-tsara ny sela matavy, miaraka amin'izay koa, fa tsy mankarary ny hoditra sy ny sela akaiky ny sela matavy.
4 cryo mitantana Cryolipolysis milina fanalefahana menaka mampihena tavy mamolavola vatana
Ny milina endrika mangatsiatsiaka Cryolipolysis dia fomba vaovao tsy manafika hampihenana ny tavy am-pahamendrehana amin'ny faritra kendrena amin'ny vatana izay miteraka fihenan'ny tavy hita voajanahary sy hita any amin'ireo faritra voatsabo.
Triglyceride amin'ny tavy dia hovana ho matanjaka indrindra amin'ny mari-pana ambany. Ny mahasamihafa ny fomba fanao amin'ny milina Cryolipolysis dia ny fampiasana teknolojia fanamafisana mandroso mba hifantohana amin'ny tavy matavy sy hanafoanana ireo sela matavy amin'ny alalàn'ny dingana miadana izay tsy manimba ireo sela manodidina.
fanesorana ny holatra, Laser estetika Co2, Masinina mpanentana hozatra Ems, Shr Ipl Opt, Co2 Laser Laser miato, Fanesorana volo Shr Opt Ipl,